न्यूयोर्क भ्रमणमा रहेका परराष्ट्रमन्त्री डा. खड्का आज स्वदेश फर्कदैं
अमेरिकाको न्यूयोर्क भ्रमणमा रहेका परराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्का आज स्वदेश फर्कदै छन् । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ७६ औं महासभामा भाग लिन अमेरिका आएका मन्त्री खड्का आफ्नो ७ दिने भ्रमण सम्पन्न गरी नेपाल फर्कने भएका हुन् ।
असोज ८ गते न्यूयोर्क आएका खड्काले महासभालाई सम्बोधन गरेका छन् । महासभालाई सम्बोधन गर्दै उनले नागरिकको जीवनलाई सरकारले पहिलो प्राथमिकतामा राखेको बताएका छन् ।
गैरआवासीय नेपाली संघले आयाेजना गरेकाे कार्यक्रममा उनले एमसीसी नेपाल सरकारले मागेकाे परियोजना भएकाे जिकिर गरेका थिए । उनले एमसीसी संशोधन पनि नहुने बताएका थिए । राजनीतिक समझदारीमा अनुमाेदन गरेर कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा पनि उनकाे जाेड थियाे ।
महासभामा भाग लिन अमेरिका आएका उनले भारत, बङ्गलादेश, कुवेत, बहराइन र चीनका विदेशमन्त्रीसँग छुट्टाछुट्टै भेटवार्ता समेत गरेका थिए ।